Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya ari kuedzwa masimba zvakasimba apo chikwata chake chiri muRufaro Stadium nesvondo kusangana neZPC Kariba iyo irikubvira moto unotyisa kubvira makundamo enhabvu emwaka uno atanga.
Ndiraya akatambidzwa basa iri svondo rapera kwadzingwa basa Lloyd Chigove ndokunoita mangange 1-1 neTelOne asi vanoongorora mutambo wenhabvu vanoti iri raive raki reachangotanga basa zvekuti mutambo neZPC Kariba ndiwo chaiwo ucharatidza kuti Ndiraya achagara pabasa kwenguva refu here.
Aka kave kechipiri Ndiraya achirairidza Dembare sezvo akambova nebasa iri muna 2015 ndokudzingwa zvakashamisa veruzhinji mushure mekunge chikwata chake chapedza chiri pachinzvimbo chechipiri, pasi peChicken Inn.
Asi muongorori wemutambo wenhabvu VaEmmanuel Matshinya vanoti Ndiraya ari panguva yakaoma sezvo vatsigiri veDembare vachida kukunda mumitambo yese inotamba chikwata chavo.
Ndiraya pachake anoti acharamba achishanda nesimba kusimudzira Dembare kubva pairi parizvino apo pasingafadze.
Sachigaro weDynamos Supporters Club yemuHarare VaBenjamin Muzira vanoti Ndiraya atanga zvakanaka nekutora poindi kunze kwemusha kuTelOne vachiti ivo vave kutarisira zvekusimudza mukombe.
Asi chikwata chiri kutungamira makwikwi aya cheFC Platinum hachisi kunyanyoremerwa apo chiri pamusha muMandava Stadium mangwana neHerentals iyo iri kutatarika.
Parizvino, FC Platinum iri pamusoro nemapoinzi matatu zvekuti mumwe mutsigiri wavo VaTatenda Makazhu vari kuona vachiwedzera hutungamiri hwavo vari pamusoro pePSL.
Asi zvikwata zvinoteverwa nechaunga Caps United neHighlanders hazvina mitambo iri nyore seFC Platinum sezvo Highlanders iine Chipangano cheHwange muBarboufields Stadium, Caps United ichidzoka kumusha muNational Sports Stadium kusangana neHarare City.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi …..
Ngezi Platinum Stars v TelOne
Black Rhinos v Triangle